Liiska 5-ta ciyaaryahan ee Caafimaad ahaan iyo Jir ahaan ugu fiican kubada cagta adduunka haatan
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Liiska 5-ta ciyaaryahan ee Caafimaad ahaan iyo Jir ahaan ugu fiican kubada...
Kubada cagta aduunka ayaa haatan ah mida ugu xiisaha badan Caalamka. inkastoo sanadkan uu saameyn ku yeeshay Corona dhanka taageeraha.
Xidigaha Aduunka badankooda ayaa caafimaad ahaan iyo jir ahaan wanaagsan marka la eego kooxaha ay u ciyaaraan markaasi iyo xiliyada ay soo mareen
Laga soo bilaabo cuntada sida saxda ah loogu talagalay ilaa hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee kala duwan ee ay adeegsadaan naadiyada, ciyaartoyda si taxaddar leh ayaa loo daryeelaa. Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, dhaawacyo ayaa dhaca mararka qaar.
Ciyaartoyda qaarkood, si kastaba ha noqotee, waxay maareeyaan inay joogaan kooxdooda iyo dalalkooda. Waxaan eegnaa:
5 ciyaartoy oo ku fiican kubbada cagta aduunka waqtigan jir ahaan iyo caafimaad ahaan
# 5 Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)
Mid ka mid ah weeraryahanada ugu weyn jiilka casriga ah, cimriga iyo dhererkiisa Zlatan Ibrahimovic ee taasi oo ka ka yaabisay taageerayaal.
39 jirkaan ayaa ku riyaaqay guulo waa weyn oo uu la soo qaatay kooxo waa weyn sida Ajax, Inter Milan, AC Milan, Paris Saint-Germain iyo Manchester United. Ka dib markii uu muddo gaaban LA joogay MLS, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Sweden ayaa ku biiray AC Milan bishii Janaayo 2020, waxaana uu ahaa weeraryahankooda ugu weyn tan iyo markaas.
# 4 Andrew Robertson (Liverpool)
Liverpool nasiib xumo ayaa ku dhacday dhanka xidigaha dhaawacmay xilli ciyaareedkaan, laakiin hal ciyaaryahan oo si joogta ah uga soo muuqday waa Andrew Robertson.
27 jirkaan ayaa 40 kulan u saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, isagoo inta badan u dhaqmayay sida halyeeyga daafaca Liverpool markii uu maqnaa Virgil van Dijk. Waxa uu u saftay 167 kulan tartamada oo dhan Liverpool tan iyo kulankiisii ​​ugu horeysay.
#3 Romelu Lukaku (Inter Milan)
Romelu Lukaku waayihiisii ​​Manchester United ayaa laga yaabaa inuusan ku socon sidii loogu talagalay, laakiin wuxuu muujinayaa tayadiisa kooxda Antonio Conte ee Inter Milan.
Lukaku ayaa kaga soo biiray kooxda Inter Milan kooxda Man United sanadkii 2019 isaga oo ugu soo biiray lacag rikoor ah oo dhan 67 milyan oo euro.
27 jirkaan ayaa heysta rikoor fiican oo dhanka dhaawac ah, isagoo si joogta ah ugu soo ciyaaray West Bromwich Albion, Everton iyo markii dambe Manchester United. Haatan wuxuu umuuqdaa inuu ku hogaamin doono kooxda Inter Milan horyaal Serie A ah.
# 2 Adama Traore (Wolverhampton Wanderers)
Traore wuxuu waqti la qaatay Aston Villa iyo Middlesbrough ka hor inta uusan ku biirin Wolverhampton Wanderers ee 2018 adduun dhan 18 milyan. 25 jirkaan ayaa muhiim u ahaa tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Wolves, iyadoo tababare Santo uu u isticmaalay garabka.
# 1 Cristiano Ronaldo (Juventus)
Mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka, 36 jirkaan ayaa jabiyay rikoorkii kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ka hor inta uusan ku biirin Juventus mana joogsan ilaa iyo hada kubadiisa Italy.
Xiddiga reer Portugal ayaa 35 kulan u saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan kooxda Marwada duqda ah, isagoo u dhaliyay 31 gool. Ronaldo wuxuu isha ku hayaa inuu door weyn ka ciyaaro xulkiisa Portugal ee Euros.
Previous articleXiddigaha Chelsea oo isku dhacay Qaarkood garoonka tababarka – Warbixin
Next articleBarcelona oo guul ka gaartay Real Valladolid Waqtigii dhamaadka Ciyaarta